Global Voices teny Malagasy » Manampy azy hiaro ny “teknolojia ara-drariny sy ankasitrahana” ny fandikan-tenin’i Rémy Vuong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Febroary 2021 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra Community Nandika Liva Andriamanantena
Sary natolotr'i Rémy Vuong ary nahazoana alàlana.
Nandika teny ho an'ny Global Voices teny Frantsay nandritra ny herintaona mahery kely i Rémy Vuong . Any Wissous , Frantsa izy no monina amin'izao fotoana izao, any akaikin'ny seranam-piaramanidina Paris-Orly, ivelan'i Paris. Nanokatra ny fahafahana vaovao hizarana tantara momba ny loza ateraky ny teknolojia mifandraika amin'ny zon'olombelona ny fandikana teny tato amin'ny GV. Na izany aza, nahafahany ihany koa nahita tantara maro miabo izay mampiseho izay azo atao amin'ny teknolojia manerantany ny fandraisany anjara.
Global Voices: Inona no ataonao any ivelan'ny GV ? Inona no zavatra hafa mahaliana anao?
Rémy Vuong (RV): 42 taona aho, mipetraka akaikin'i Paris, Frantsa, ary manan-janaka roa. Miasa amin'ny programan'ordinatera aho izay tena tiako hatramin'ny izaho mbola 8 na 9 taona teo. Tiako ihany koa ny mianatra sy manofana fahaiza-manao vaovao, hatramin'ny haiady ka hatramin'ny fiompiana tantely.
RV: Taona vitsivitsy lasa izay, nandao ny asako aho ary nifindra tamin'ny fampianarana ankizy, izay naharitra 2 taona. Sarotra sy nandreraka izany satria niainga tamin'ny tsy nisy aho, saingy io no iray tamin'ireo zavatra niainako nahaliana indrindra sy nampientanentana indrindra tamin'ny fiainako. Mitranga ny zava-mahagaga rehefa manome hevitra anao ny ankizy !
RV: Ataoko angamba fa tsy misy mila ny filazalazana momba an'i Paris, na momba ny tsara, na ny ratsy ihany koa. Saingy somary samihafa ilay tanàna ipetrahako. Akaiky an'i Paris ny toerana nefa tena milamina, voahodidin'ny saha sy ala ala. Hitanao ao mihitsy aza ny toera-pamokarana zana-kazo lehibe, izay hiavian'ny hazo sy ny voninkazo rehetra ao Paris!
RV: Mino aho fa toa an'i Janus ny teknolojia vaovao, ilay sehatr'asako: sady ilay tsara indrindra no ratsy indrindra ho an'ny olombelona. Tiako hitarika ny asa ataoko ny etika, ny hatsaram-panahy ary ny fahalalahan-tanana. Fa mba hahavitana an'izany dia mila nanamafy ny fomba fijeriko momba izany aho. Koa nanomboka nanao fikarohana betsaka momba izany aho ary nahita ny GV.
Avy eo, herintaona lasa izay, namaly ny antso ho mpandika teny aho. Tsy manana traikefa amin'ny fandikan-teny aho, nefa zavatra roa no tiako momba izany: voalohany, afaka nanatsarako ny fahaizako teny ( Anglisy sy ho an'ny tenin-drazako Frantsay ihany koa aza).
Faharoa, nanokatra ny làlana tiako haleha ity fomba iray lehibe ity: nitaterako ny fihoaram-pefy mifandraika amin'ny teknolojia, ary niarovako ny teknolojia ara-drariny sy ankasitrahana. Tetikasa lehibe ny Advox, raha ny hevitro. Amin'ny ankapobeny, niditra an-tsehatra tamin'ny fiarovana ny zon'olombelona aho niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana nosafidiko manokana.
RV: Manangona ireo vavolombelona eran'izao tontolo izao ny Global Voices, ary manome azy ireo toerana iresahana nefa tsy misy sivana avy amin'ny vondron'ny fampitam-baovao.
Fomba tsara iray lehibe hanomezana hafatra marina sy mivantana ho an'ny mpamaky izany amiko. Mino aho fa ny GV dia fomba iray mahomby amin'ny fanabeazana ny tanora sy hanomezana azy ireo ny fomba hananganany ny tontolony.
RV: Nanjary sehatra ampiasaiko manokana ny Global Voices rehefa hiresaka ampahibemaso momba izay zava-dehibe amiko aho. Raha tsy misy GV dia mety tsy hanana toerana ho an'ny daholobe hifandraisana aho. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, mamela ahy hampiely ny hafatra tiako alefa ny fandikan-teny, saingy nandefa lahatsoratra ihany koa aho indray mandeha izay ary tena nampivoatra ahy io traikefa io. Misaotra an'ireo mpikambana GV marobe izay nanampy ahy tamin'izany dingana izany.
RV: Talohan'ny nandraisako anjara tato amin'ny GV, tsikaritro ny lafiny ara-teknolojia mampidi-doza maro: ny fanaraha-maso, ohatra. Nahatonga ahy hieritreritra izany fa mandray anjara amin'ny zavatra ratsy sy maloto aho.
Nandray anjara tato amin'ny GV nandritra ny heritaona aho ary namaky lahatsoratra miabo sy manaitra maro izay heveriko fa voalanjalanja kokoa ny fomba fijeriko ankehitriny.
Nanome ahy ity fomba miabo ity handinihana izao tontolo izao izay tsy hitako teo aloha ity ny GV. Te-hanaparitaka ity hafatra ity aho sy hanokatra ny mason'ny olona rehetra izay miady ho amin'ny tsara.
Araho ao amin'ny Twitter i Rémy ao amin'ny @rvuong_geek 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/14/151374/
 takelaka : https://community.globalvoices.org/guide/organizational-guide/gver-of-the-week-form/